စာပို့- နှင့်တယ်လီဖုန်းစာရင်း | Holmbygden.se
ချောချောမွေ့မွေ့ Holmes ခရိုင်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဖြူးရန်, ငါတို့ e-mail ကိုထူထောင်ခဲ့ကြ- နှင့်တယ်လီဖုန်းစာရင်း. ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ပြောဆိုဆိုပါတယ်ရန်လိုအပ်ပါသည်အရာပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားစေခြင်းငှါ. ပထမဦးဆုံးဥပမာအားဖြင့်အများစုအလွယ်တကူအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ပြုသောအမှု dispatch နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့တိုတောင်းအသိပေးစာမှာလည်းတယ်လီဖုန်းဖြင့်လည်းဆက်သွယ်နှင့်စာသားကိုအသုံးပြုစေခြင်းငှါ.
ဥပမာအားကျောင်းမှအစည်းအဝေးများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်, ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်ခဲ့သည်ပါလိမ့်မည်နှင့် e-ပို့. အကယ်. သို့သော်ရုံကားတစ်စီးခိုးယူတွေ့ရှိခဲ့သို့မဟုတ်ခဲ့ဖောက်ထွင်းလျင်မြန်စွာသတင်းအချက်အလက်ထွက်ရတဲ့အတှကျအမြားဆုံးအဆင်ပြေ option ကိုဖြစ်လျင်မြန်စွာအစုလိုက်အပြုံလိုက် sms ကိုဖွစျစနေို, အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
သငျသညျနောက်မှနောင်တမနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမလိုချင်ကြဘူး, ကိုယ့်ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@holmbygden.se နှင့်အကြောင်းကြား.
သငျသညျ Holmes မှာပြီးသားရပ် အကယ်. အဆိုပါစာရင်းကိုလည်းဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို update လုပ်ဖို့အကောင်းတစ်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်. သင့်လျော်သောလယ်ပြင်၌အသစ်သောအလုပ်တခုကို Enter. သတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုစဲရှိသည်, ကိုယ့်ကိုရိုက်ထည့် “ရပ်စဲ” သင့်လျော်သောခေါင်းစဉ်အောက်တွင်.
ဆက်နွယ်မှု Holmes (t.ex. \_"uppväxt i\_", \_"sommarstugegäst\_", \_"boende\_" စသည်တို့ကို)*
အားဖြင့် / Adress (t.ex. \_"Anundgård 122\_", \_"Sundsvall\_" စသည်တို့ကို):
ဆယ်လူလာဖုန်း2/ အလုပ်အဖွဲ့:
Ev. မစ်ရှင်, ကုမ္ပဏီများသည်စသည်တို့ကို. (t.ex. \_"Ordf. Drakabergets SK\_", \_"Peters Färg AB\_"):